लावाजुनी एक सार्थक चलचित्र हो – जागरण अनलाइन
लावाजुनी एक सार्थक चलचित्र हो
२०७५ चैत्र २, शनिबार ०८:३१ मा प्रकाशित
गेहेन्द्र बस्नेत, कार्यकारी निर्माता– चलचित्र लावाजुनी
अहिले खास नयाँ अभियान त केही सञ्चालन गरेको छैन । व्यवसाय, राजनीति र सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय छु । बरु अब चाँडै चलचचित्र लावाजुनीको प्रदर्शनको तयारीमा जुट्दैछु ।
लावाजुनीको कुरा गर्नुभयो । साँच्चै कहाँ गयो तपाइँहरुको लावाजुनी चलचित्र ?
लावाजुनीको सबै काम सकिएको छ । केही दिनमै सेन्सरको काम पनि सकिन्छ । त्यसपछि हामी तुरुन्त प्रोमो रिलिज गर्छौं ।
चलचित्र रिलिज चाहिँ कहिले गर्ने नि ?
चलचित्र पनि अब छिटै प्रदर्शन हुन्छ । पहिले हामी देशबाहिरबाट लावाजुनीको प्रदर्शन गर्छौैं, त्यसपछि देशभित्र प्रदर्शन हुन्छ । विदेशमा प्रदर्शनका लागि आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ ।
लावाजुनी कस्तो चलचित्र हो ?
लावाजुनी कम्लरी विषयवस्तुमा बनेको एक सामाजिक सन्देशमूलक चलचित्र हो । यसमा हामीले सस्तो मूल्यमा बेचिएका थारु बालिकाहरुले मालिकको घरमा भोग्नु परेको यौनशोषण, उत्पीडन, दुव्र्यवहारका साथै उनीहरुको मुक्तिको चाहना र सपना देखाएका छौं ।
चलचित्र कस्तो बनेको छ त ?
समग्रमा लावाजुनी चलचित्र निकै उत्कृष्ट बनेको छ । कथा निकै खँदिलो र पुष्ट छ । चरित्रहरु जीवन्त छन् । यथार्थ, सार्थक र कलात्मक दृश्यहरुले चलचित्र भरिएको छ । कलाकारहरुले निकै सशक्त र जीवन्त अभिनय गरेका छन् । केही समय अघि हामीले दाङको घोराहीमा लावाजुनीको विशेष प्रदर्शन गरेका थियौं । दर्शकहरुले चलचित्र निकै मन पराउनुभयो । चलचित्रको विषयवस्तु, कथा र प्रस्तुतिकरण निकै अब्बल रहेको उहाँहरुको टिप्पणी थियो । यसबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं । लावाजुनी नेपाली चलचित्र उद्योगको एक सार्थक चलचित्रको रुपमा दरिने हाम्रो विश्वास छ ।
त्यसो भए लावाजुनी हिट हुने पक्का छ हैन त ?
हामीलाई हिट र फ्लपसँग केही मतलब छैन । हामीले देशको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयमा एक गम्भीर र सार्थक चलचित्र बनाएका छौं । तराईका श्रष्टा थारुहरुका छोरीहरुमाथि कम्लरी प्रथाले कस्तो अन्याय गरेको थियो, त्यो छर्लंग देखाएको छौं र उनीहरुको मुक्ति र शिक्षाको लागि आवाज उठाएका छौं । लावाजुनी एकदम अलग चलचित्र हो । यो मसालेदार वा हावादारी फिल्म होइन । मसालेदार फिल्म रुचाउनेहरुले लावाजुनी नरुचाउन पनि सक्छन् ।
लावाजुनीले लगानी उठाउला त ?
यो व्यावसायिक फिल्म नभएको हुँदा लगानी उठ्नेबारे हामी पूर्ण आशावादी छैनौं । तर आमरुपमा लावाजुनी एक सार्थक चलचित्रको रुपमा दरिने कुरामा हामी ढुक्क छौं । नेपालमा फरकधारका चलचित्रहरुको खास बजार छैन । नेपाली दर्शकहरु मसालेदार फिल्ममा बानी परेका छन् । पछिल्लो समय साउथ इण्डियन फिल्मले नेपाली दर्शकहरुको रुचि र मनोविज्ञानलाई भड्काएको छ । यसरी हेर्दा लावाजुनीलाई केही असर पर्न पनि सक्छ । मूलरुपमा हामीले आफ्नै परिवेशका विषयवस्तु, घटना र पात्रहरुलाई लिएर चलचित्र बनाएका हौं । चलचत्रिबाट सामाजिक जागरण फैलाउने उद्देश्यबाट हामी बढी प्रेरित छौं । हामीले लगानी के हुन्छ ? भनेर कहिल्यै चिन्ता गरेनौं । अतः हामी निष्फिक्र छौं ।
अनि कलाकारहरु को को छन् नि ?
लावाजुनीमा प्रायः सबै स्थानीय र नयाँ कलाकारहरु छन् । नाम लिनुपर्दा छविलाल कोपिला, ज्वाला खतिवडा, अनिता महतारा, सुशीला चौधरी, वर्षा लम्साल, सुप्रिया देवकोटा, निश्मा ओलीलगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । उहाँहरु नयाँ भए पनि अभिनय निकै उत्कृष्ट गर्नुभएको छ । आफ्नो भूमिकामा उहाँहरुले न्याय गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय र स्थापित कलाकारहरु भन्दा उहाँहरु कुनै हिसाबले कमजोर हुनुहुन्न । हामीले अडिसनबाट कलाकारहरु छनौट गरेका हौं । फिल्म शुरु गर्नुअघि वर्कशप पनि गरेका थियौं । त्यसमा पनि निर्देशक केएल पीडितले उहाँहरुको सिर्जनशीलता र क्षमतालाई भरपूररुपमा अभिव्यक्त गराउनुभएको छ ।
अब पनि तपाईं चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुहुने हो ?
मूलरुपमा अहिले म व्यवासाय र राजनीतिमा संलग्न छु । चलचत्रि मेरो रुची क्षेत्र हो । म पूर्णरुपमा चलचित्र क्षेत्रमा नलागे पनि यसप्रति मेरो लगाव सधैंभरि रहनेछ । राम्रो विषयवस्तु र टिम मिल्यो भने फेरि फेरि पनि चलचित्र निर्माण गर्नेछु ।
चर्चित लोक गायिका शर्माको तीज गीत ‘चौतारी’ सार्वजनिक (भिडियो) २०७५ चैत्र २, शनिबार ०८:३१
कला लम्सालकाे ‘पातली ‘ बोलको तिज गीत सार्वजनिक(भिडियोसहीत) २०७५ चैत्र २, शनिबार ०८:३१
कविता: माननीयज्यू अब त अति भएन र ? २०७५ चैत्र २, शनिबार ०८:३१